ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ - Padaethar
fbသုံးနေတဲ့မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အနည်းငယ်သာပြောင်း၍ရေးပါသည်။တစ်နေ့ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်း ပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။
အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြောကောင်းလွန်းလှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
”အပျိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကျမကို နည်းနည်း တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ခနလောက်ငိုင်နေပြီးမှကျမယောင်္ကျားနဲ့ ကျမ အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံ ပို့ပေးလိုက်တယ်။“ညီမတို့ ချစ်သူတွေလား “ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးက ကျမကို ကြည်နူးသွားစေပါတယ်ဘေးနားမှာ အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့သားလေးကိုမလုံမလဲ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။
ကျမယောကျာ်း လူရိုးကြီးကတော့ယာတောကပြန်မလာသေးပါဘူး။ကျမ ထင်လိုက်တာကတစ်ခါတည်းနားအေးအောင်ဆိုပြီး အမှန်ကိုချပြလိုက်တာမှ ပိုဆိုးသွားပါတယ် တိုတိုနဲ့လိုရင်းကိုပြောရရင်ကျမ တို့နေ့တိုင်းဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ဖုန်းမလာရင်ကျမကစခေါ်တတ်နေပါပြီကျမယောက်ျား လူရိုးကြီးကတောဘာမှမသိရှာပါဘူး။သူ့ကတော့ ကျမကိုသိပ်ပြီးဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးယာတော နဲ့အိမ် ကူးနေတာနဲ့သူ့ကျွဲတွေနဲ့တင် အချိန်ကုန်နေရှာတာပါ။
ထင်ထားတဲ့အတိုင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းသူက ကျမကို သိပ်ချစ်ကြောင်းတွေပြောလာပါတော့တယ်။ကျမအဖြေကိုတော့မပြောတော့ပါဘူးသူကတစ်ဆင့်တက်လာပါတယ် ကန်တော့ပါရှင်လင်မယားတွေကြားမှ ပြောရမဲ့စကားတွေကိုတစ် တစ်ခွခွပြောလာပါတယ်။
အစကနားမထောင်ရဲပေမဲ့နောက်တော့စွဲလမ်းလာပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့အပြင်မှာတွေ့ချင်တယ်တဲ့။ကျမယောက်ျားနဲ့သားလေးမျက်နှာကိုဖြတ်ကနဲ မြင်ယောင်မိတယ်။ ကျမယောက်ျားကကျမကို သိပ်ချစ်ရှာပါတယ်။ သူရှာဖွေထားသမျှကျမကိုအကုန်အပ်တယ်။
ကျမပျင်းနေမှာစိုးလို့ဆိုပြီးဖုန်းကိုတောင်သူမကိုင်ဘဲကျမကိုပဲပေးကိုင်ရှာတာပါ။ငွေဆိုလည်းမစားရက် မသောက်ရက်နဲ့သိန်းနှစ်ဆယ်လောက်စုမိနေပါပြီ။ ဒါနဲ့ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်ရှင် ဆိုပြီးငြင်းဆန်လိုက်မိပါတယ်။
သူကစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်မိန်းကလေးပီသလို့ ပိုတောင်တန်ဖိုးထားမိပါတယ်ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်။တစ်နေ့မှတော့ကျမယောက်ျားဝါးတောသွားတဲ့နေ့သူ့ ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ သူ ကျမတို့ ရွာထိပ်မှာရောက်နေတယ်တဲ့တွေ့ချင်လွန်းလို့ အဝေးကြီးက လာခဲ့ရတာပါတဲ့ခနလေးတွေ့ပါရစေတဲ့မဆွတ်ခင်ကညွတ်မခြွေခင်က ကြွေချင်နေတဲ့ကျမသားလေးအိပ်မောကျ ချိန်မှာသွားတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေရာရောက်တော့လူတစ်ယောက်ကကျမနဲ့မောင်စီးလာတဲ့ကားလေးကို လာယူသွားတယ်။ကားဂိတ်ကို ခြေလျင်လျောက်ကြတယ်။ကားဂိတ်ရောက်တော့ကားတစ်စီးပေါ်မှာနေရာယူလိုက်ကြတယ်။
မောင်ကလူတွေရိပ်မိမှာစိုးလိုတဲ့သူ့ကိုယ်သူ ဦးထုပ်ကို မျက်နှာမပေါ်အောင်ခပ်ငိုက်ငိုက်ဆောင်းထားပြီးကျမခေါင်းကို ပုဝါခြုံခိုင်း ထားတယ်မောင်ကကျမကို ခပ်တိုးတိုးလေးပြောတယ်ကလေးတဲ့ …. မောင်တို့တစ်ညလုံးဘာမှမစားရသေးဘူးတဲ့မောင်အစားအစာတွေသွားဝယ်အုန်းမယ်တဲ့….
နောက်ဆုံးတော့မရှက်နိုင်တော့ပါဘူးဟိုလူ့အကူညီတောင်းသည်လူ့ အကူညီတောင်းနဲ့ရဲစခန်းရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အထောက်အထားဘာမှမရှိမှတ်မိတဲ့မောင့်ဖုန်းနံပါတ်ကျမဖုန်းနံပါတ်တွေဆက်ကြည့်ကြတော့တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါတဲ့…
ကျမ ဝမ်းနည်းစိတ်ကြောင့် ငိုမိတယ် . . .ကျမ မိဘတွေရဲ့ မျက်နှာကျမ ဆွေမျိုးတွေ ရဲ့ မျက်နှာကျမ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျမ ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲ။ကျမသာ အရင်ကတည်းကလင်နဲ့သားအပေါ်ကိုယ့်ချင်းစာစိတ်ရှိရင်ကျမတို့ မိသားစုဘဝလေးအခုလို ပျက်စီးမှာ မဟုတ်ဘူး . . . . . .
ခုတော့ ကျမ ခလေးတစ်ဖက်နဲ့ကျမ ဘဝ ပျက်ပါပြီ .ကိုယ့်ကြောင့် မိသားစုဘဝ ပျက်ခဲ့တာကိုယ့် ယုံစားခဲ့တာ ။FB က ပရိုဖိုင်လေးမှာကော်လံကတုံးအဖြူလေးနဲ့ ဆံပင်အတိုယောပုဆိုးလေးနဲ့ မောင်ကိုကျမ လူကြီး လူကောင်း ဆန်တယ်ဆိုပြီး ယုံစားမိခဲ့တာအဖေ အမေ မျက်နှာရယ်လင်နဲ့သားမျက်နှာရယ် တစ်သက်လုံးစောင့်ထိန်းခဲ့တဲ့ကိုယ့်ကျင့်တရားရယ် . . . . . .
ကိုယ့်ပေးဆပ်ရတော့မယ့်အရှက်သိက္ခာ အကြီးကြီးရယ် ။နောက်ထပ် သတိရတာက နိုင်လွန်ကြိုးခွေ တစ်ခုအခု ကျမ ဘာလုပ်သင့်လည်း . .အစ်မ တို့ ညီမတို့ကော အဲလို ကြုံကြိုက်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်း မလဲအရေးကြီးတယ် ။လိမ်နည်းအသစ်တွေ နဲ့ချည်းကပ်တက်တယ် ။
ဖစျေ့ဘုတျသုံးနတေဲ့ မိနျးကလေးမြား ဖတျရနျတကယျ့ဖွဈရပျမှနျ ဇာတျလမျးလေးပါ
fbသုံးနတေဲ့မိနျးကလေးမြား ဖတျရနျဖွဈရပျမှနျကို အနညျးငယျသာပွောငျး၍ရေးပါသညျ။တဈနရေု့ပျဖွောငျ့ဖွောငျ့ လူလတျပိုငျးဓာတျပုံတငျထားတဲ့ အကောငျ့တဈခု မကျဆငျဂြာကနညေီမလေး အဈကိုစကားနညျးနညျး ပွောခငျြလို့ ရလား “ဆိုပွီးစာဝငျလာတယျ။
အကူအညီတဈခုတောငျးခငျြလို့ပါတဲ့ဟုတျကဲ့ လို့ရေးမိလိုကျတာနဲ့ဗှီဒီယိုကော ချေါတာခံလိုကျရတယျ။ရုပျဖွောငျ့သလောကျ အပွောကောငျးလှနျးလှတဲ့သူ့ စကားတှကွေားမှာဖုနျးကို ပိတျမပဈရကျအောငျ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
”အပြိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကမြကို နညျးနညျး တုနျလှုပျစခေဲ့တယျ။ခနလောကျငိုငျနပွေီးမှကမြယောင်ျကြားနဲ့ ကမြ အတူတူတှဲရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံလေး တဈပုံ ပို့ပေးလိုကျတယျ။“ညီမတို့ ခဈြသူတှလေား “ဆိုတဲ့ မေးခှနျးလေးက ကမြကို ကွညျနူးသှားစပေါတယျဘေးနားမှာ အိပျပြျောနရှောတဲ့သားလေးကိုမလုံမလဲ ကွညျ့လိုကျမိတယျ ။
ကမြယောကျြား လူရိုးကွီးကတော့ယာတောကပွနျမလာသေးပါဘူး။ကမြ ထငျလိုကျတာကတဈခါတညျးနားအေးအောငျဆိုပွီး အမှနျကိုခပြွလိုကျတာမှ ပိုဆိုးသှားပါတယျ တိုတိုနဲ့လိုရငျးကိုပွောရရငျကမြ တို့နတေို့ငျးဖုနျးပွောဖွဈခဲ့ပါတယျ။
သူ့ဖုနျးမလာရငျကမြကစချေါတတျနပေါပွီကမြယောကျြား လူရိုးကွီးကတောဘာမှမသိရှာပါဘူး။သူ့ကတော့ ကမြကိုသိပျပွီးဂရုမစိုကျနိုငျပါဘူးယာတော နဲ့အိမျ ကူးနတောနဲ့သူ့ကြှဲတှနေဲ့တငျ အခြိနျကုနျနရှောတာပါ။
ထငျထားတဲ့အတိုငျးမြှျောလငျ့ထားတဲ့အတိုငျးသူက ကမြကို သိပျခဈြကွောငျးတှပွေောလာပါတော့တယျ။ကမြအဖွကေိုတော့မပွောတော့ပါဘူးသူကတဈဆငျ့တကျလာပါတယျ ကနျတော့ပါရှငျလငျမယားတှကွေားမှ ပွောရမဲ့စကားတှကေိုတဈ တဈခှခှပွောလာပါတယျ။
အစကနားမထောငျရဲပမေဲ့နောကျတော့စှဲလမျးလာပါတော့တယျ။ နောကျဆုံးတော့အပွငျမှာတှခေ့ငျြတယျတဲ့။ကမြယောကျြားနဲ့သားလေးမကျြနှာကိုဖွတျကနဲ မွငျယောငျမိတယျ။ ကမြယောကျြားကကမြကို သိပျခဈြရှာပါတယျ။ သူရှာဖှထေားသမြှကမြကိုအကုနျအပျတယျ။
ကမြပငျြးနမှောစိုးလို့ဆိုပွီးဖုနျးကိုတောငျသူမကိုငျဘဲကမြကိုပဲပေးကိုငျရှာတာပါ။ငှဆေိုလညျးမစားရကျ မသောကျရကျနဲ့သိနျးနှဈဆယျလောကျစုမိနပေါပွီ။ ဒါနဲ့ပဲမဖွဈနိုငျဘူး ထငျပါတယျရှငျ ဆိုပွီးငွငျးဆနျလိုကျမိပါတယျ။
သူကစိတျမဆိုးတဲ့အပွငျမိနျးကလေးပီသလို့ ပိုတောငျတနျဖိုးထားမိပါတယျဆိုပွီးပွောလာပါတယျ။တဈနမှေ့တော့ကမြယောကျြားဝါးတောသှားတဲ့နသေူ့ ဖုနျးဝငျလာပါတယျ။ သူ ကမြတို့ ရှာထိပျမှာရောကျနတေယျတဲ့တှခေ့ငျြလှနျးလို့ အဝေးကွီးက လာခဲ့ရတာပါတဲ့ခနလေးတှပေ့ါရစတေဲ့မဆှတျခငျကညှတျမခွှခေငျက ကွှခေငျြနတေဲ့ကမြသားလေးအိပျမောကြ ခြိနျမှာသှားတှဖွေ့ဈခဲ့ပါတယျ။
တဈနရောရောကျတော့လူတဈယောကျကကမြနဲ့မောငျစီးလာတဲ့ကားလေးကို လာယူသှားတယျ။ကားဂိတျကို ခွလေငျြလြောကျကွတယျ။ကားဂိတျရောကျတော့ကားတဈစီးပျေါမှာနရောယူလိုကျကွတယျ။
မောငျကလူတှရေိပျမိမှာစိုးလိုတဲ့သူ့ကိုယျသူ ဦးထုပျကို မကျြနှာမပျေါအောငျခပျငိုကျငိုကျဆောငျးထားပွီးကမြခေါငျးကို ပုဝါခွုံခိုငျး ထားတယျမောငျကကမြကို ခပျတိုးတိုးလေးပွောတယျကလေးတဲ့ …. မောငျတို့တဈညလုံးဘာမှမစားရသေးဘူးတဲ့မောငျအစားအစာတှသှေားဝယျအုနျးမယျတဲ့….
နောကျဆုံးတော့မရှကျနိုငျတော့ပါဘူးဟိုလူ့အကူညီတောငျးသညျလူ့ အကူညီတောငျးနဲ့ရဲစခနျးရောကျခဲ့ပါတော့တယျ။ အထောကျအထားဘာမှမရှိမှတျမိတဲ့မောငျ့ဖုနျးနံပါတျကမြဖုနျးနံပါတျတှဆေကျကွညျ့ကွတော့တပျဆငျထားခွငျးမရှိပါတဲ့…
ကမြ ဝမျးနညျးစိတျကွောငျ့ ငိုမိတယျ . . .ကမြ မိဘတှရေဲ့ မကျြနှာကမြ ဆှမြေိုးတှေ ရဲ့ မကျြနှာကမြ ပတျဝနျးကငျြမှာ ကမြ ဘယျလိုမကျြနှာပွရမလဲ။ကမြသာ အရငျကတညျးကလငျနဲ့သားအပျေါကိုယျ့ခငျြးစာစိတျရှိရငျကမြတို့ မိသားစုဘဝလေးအခုလို ပကျြစီးမှာ မဟုတျဘူး . . . . . .
ခုတော့ ကမြ ခလေးတဈဖကျနဲ့ကမြ ဘဝ ပကျြပါပွီ .ကိုယျ့ကွောငျ့ မိသားစုဘဝ ပကျြခဲ့တာကိုယျ့ ယုံစားခဲ့တာ ။FB က ပရိုဖိုငျလေးမှာကျောလံကတုံးအဖွူလေးနဲ့ ဆံပငျအတိုယောပုဆိုးလေးနဲ့ မောငျကိုကမြ လူကွီး လူကောငျး ဆနျတယျဆိုပွီး ယုံစားမိခဲ့တာအဖေ အမေ မကျြနှာရယျလငျနဲ့သားမကျြနှာရယျ တဈသကျလုံးစောငျ့ထိနျးခဲ့တဲ့ကိုယျ့ကငျြ့တရားရယျ . . . . . .
ကိုယျ့ပေးဆပျရတော့မယျ့အရှကျသိက်ခာ အကွီးကွီးရယျ ။နောကျထပျ သတိရတာက နိုငျလှနျကွိုးခှေ တဈခုအခု ကမြ ဘာလုပျသငျ့လညျး . .အဈမ တို့ ညီမတို့ကော အဲလို ကွုံကွိုကျခဲ့ရငျဘယျလိုဖွရှေငျး မလဲအရေးကွီးတယျ ။လိမျနညျးအသဈတှေ နဲ့ခညျြးကပျတကျတယျ ။
မိဘချွေးနဲ့ခြေဆေးပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ် စတေးနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်